Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီစက်ဘီးဘွိုင်လာခွေးအအပြုံးတနင်္ဂနွေဓာတ်ပုံ
20 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
#ankaramobility Mobility ကိုအပတ်အခြေတည်နှင့် tags များနှင့်အတူရှယ်ယာဓာတ်ပုံများ3အပြန်အလှန်ဧရိယာ #mobilityweek နှင့်လူအများစုကဖျော်ဖြေပွဲမတိုင်မီ Haluk Levent ဆိုင်ကယ်မှရပါလိမ့်မယ်။
▪Hသင်တန်းသားများကိုဥရောပ Mobility ကိုအပတ်ဖြစ်ရပ်များ၏ 22 စက်တင်ဘာလ 2019-ရေးရာဓာတ်ပုံကိုတစ်ရက်: 10.00 - 17.00 Twitter ပေါ်တွင် #ankaramobility နှင့် #mobilityweek hashtags ကိုတက်ဂ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
▪ 22 စက်တင်ဘာလ 2019 တနင်္ဂနွေ twitter'da မှာ 17.00 19.003အသုံးပြုသူများအကြားအပြန်အလှန်အများစုဒေသများဆုကြေးဇူးကိုစက်ဘီးပါလိမ့်မည်။
▪အပြန်အလှန်အများစုဒေသများနှင့်အခြား3အသုံးပြုသူများသည်အတွက်နေရာထားရှိခြင်း, အရံစာရင်းတွင်ရာအရပ်ကိုယူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါAnıtpark Haluk Levent တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့်▪စက်ဘီး 22 စက်တင်ဘာလ 2019 19.30 နာရီဖျော်ဖြေပွဲစင်မြင့်ရှေ့တော်၌အပျတျောမူလိမ့်မည်။
ရုရှားမီးရထား, ကာဇန် '' ကာဇန်-2 '' တစ်စက္ကန့်မီးရထားဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ် 06 / 08 / 2012 ရုရှားမီးရထား, ကာဇန် '' ကာဇန်-2 '' တစ်စက္ကန့်မီးရထားဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ သြဂုတ်လရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မီးရထားအလုပ်သမားများနေ့၏ပထမတနင်္ဂနွေကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေ့ပှဲ၏မူဘောင်အတွင်းကာဇန်အတွက်အသစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာဒီနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားတက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲဝန်ဆောင်မှုသို့သွားပါလိမ့်မယ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပ xnumx't ပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံအဆောက်အအုံတက္ကသိုလ်အားကစားပြိုင်ပွဲကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစောပိုင်းကအဆိုပါဘွိုင်လာနယ်ပယ်များတွင်လုပ်ထုတ်ပြန်ချက်များအရဒါဟာ 2013 2013 ဘီလီယံကိုရူဘယ်သို့ခွဲခြားခဲ့သည်။ 11 ဘီလီယံအထိဒီဘတ်ဂျက်၏အဘို့ကိုသဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ မေလ 3.5 နှစ်များတွင်ရုရှားမီးရထားကာဇန်၏ဗဟိုကနေလေဆိပ်မှဝင်ရောက်ခွင့်လွယ်ကူချောမွေ့ရန်မီးရထားဘူတာရုံတည်ဆောက်ရန်စီမံကိန်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုနှစ် 2011 700 အတွက်ကုန်ကျရန်စီမံကိန်းများအတွက်သန်းရူဘယ်ရန်မျှော်လင့်နေသည် ...
ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီး Initiative မှ '' ဦးဝင်း-ဝင်းက 'ဥာဏ်နှင့်တကွအကောင်အထည်ဖော်ရပါမည် 23 / 05 / 2019 ထို့အပြင်ရည်ရွယ်ချက်များချိတ်ဆက်အားဖြင့်ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီးGirişimi`N, အာရှ, ဥရောပ, အာဖရိကနဲ့တောင်တောင်အမေရိကအဖြစ်လူသိများပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦန်ကြီးအမ် Cahit Turhan, နယူးပိုးလမ်းမ, သူတို့တစ်တွေအလွန်အရေးကြီးသောပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ်တန်ဖိုးထားကြောင်းဖျော "ဤလောကကိုဖြတ်ပြီး xnumx't နိုင်ငံများထက် ပို. ပါဝင်သောပဏာမခြေလှမ်းတစ်ခုကြီးမားစီမံကိန်းကိုတစ်ဦးသည်ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 65 ဘီလီယံဧရိယာနှင့် ပတ်သက်. 40 သန်းစတုရန်းကီလိုမီတာဖုံးအုပ်လျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့်, နှစ်နိုင်ငံ, ဘက်ပေါင်းစုံနှင့်ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဥာဏ်၏နိုင်ငံများတွင် '' Win-Win '' အကောင်အထည်ဖော်မှုအဘို့ဤပဏာမခြေလှမ်းအနေဖြင့်အကျိုးရှိမည်ကြီးမြတ်အရေးပါမှုသည်။ "သူကဆိုသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးဖိုရမ်တူရကီ Turhan (ITF), ဂျာမဏီ၏ဝန်ကြီးများကိုယ်စားပြုတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် Peron Stop မော်ဒယ်ကီလိုမီတာ 123 800 Making + 08 / 06 / 2017 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 123 ၏မော်ဒယ် TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုလုပ်ခြင်း km + 8005စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် Peron Stop ။ KM + 123 800 MODEL Make STOP နှင့်ပလက်ဖောင်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စိုက်ပျိုးဝယ်ယူမှုများနှင့် STOCK စီမံခန့်ခွဲရေး CONTROL ZONE အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2017 / 277845 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) နေရပ်လိပ်စာ: Civil CAD ၏YEŞİLTEPEGAZÝခရိုင်။ NO: 10 /244070 YEŞİLYURTYEŞİLYURT MALATYA / MALATYA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124820 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgeinsaatihale@tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဧပြီလ 29 2012 အတွက် Gebze-Pendik လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့သည် 27 / 04 / 2012 Gebze-Pendik လိုင်း: 'Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci- ၏ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေကဆောင်ရွက်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Marmaray စီမံကိန်းHalkalı အဆိုပါ Gebze-Pendik လိုင်းများ၏ဆောက်လုပ်ရေး၏ section အောက်တွင်ခရီးသွားလက်မှတ်ရထား, Electromagnetic စနစ်များ '' တိုးတက်စေူခင်းဧပြီလ 29 စတင်ပါလိမ့်မယ်။ ကြောင့် Gebze-Pendik လိုင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးကျင့်သောအကျင့်ရထားပေါ်တွင်ပြတ်တောက်လိမ့်မည်။ ခရီးသည်ရထား, Haydarpasa-Pendik-Haydarpaşaလိုင်းတစ်နေ့တစ်ကြိမ် 176 ပါလိမ့်မယ်။ TCDD သည် Marmaray စီမံကိန်း '' Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci- ဖွငျ့ရေးသားထားသောကြေညာချက်အရHalkalı အလုပ် Gebze-Pendik ဧပြီလ 29 2012 ၏ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများတိုးတက်စေူခင်း, လြှပျစစျစနစ်များကို '' နယ်ပယ်ခေတ်မီအလုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတနင်္ဂနွေကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Gebze-Pendik လိုင်း၏, ထိုရထားလမ်း၏ Pendik-Gebze အပိုင်းအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်စတင်ခရီးသည်ရထား 176-Haydarpasa Haydarpasa-Pendik အကြားဝန်ဆောင်မှုနေ့ကခရီးများကိုပါလိမ့်မယ်။ တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် ...
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဇွန်လ 19 1892 တနင်္ဂနွေ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုစတင် 19 / 06 / 2012 ဇွန်လ 19 1892 တနင်္ဂနွေ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုအားစတင်ခဲ့ပါသည်။
လုံခြုံရေးကင်မရာများ Karaman အတွက်စီးတီးဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ install လုပ်ထားခဲ့ကြ
IBB '' İmamoğlu Metrobus Masjid မှာရပ်တန့်နီးစပ်ခဲ့ 'ဆိုတဲ့သတင်းငြင်းဆို
ရုရှားမီးရထား, ကာဇန် '' ကာဇန်-2 '' တစ်စက္ကန့်မီးရထားဘူတာရုံဖွင့်လှစ်ဖို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်
ခါးပတ်နှင့်လမ်းမကြီး Initiative မှ '' ဦးဝင်း-ဝင်းက 'ဥာဏ်နှင့်တကွအကောင်အထည်ဖော်ရပါမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် Peron Stop မော်ဒယ်ကီလိုမီတာ 123 800 Making +
ဧပြီလ 29 2012 အတွက် Gebze-Pendik လိုင်းဆောက်လုပ်ရေးနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့သည်
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: ဇွန်လ 19 1892 တနင်္ဂနွေ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားဝန်ဆောင်မှုစတင်
Konya လမ်းရထားတနင်္ဂနွေဖေဖော်ဝါရီလ 10 ကို run ပါလိမ့်မယ်
ရွာ၏ Gulab ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအခြေစိုက်နင်္ဂနွေနေ့ကိုချွတ်ကိုစလှေတျခဲ့သညျ
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: ဇွန်လ 19 1892 တနင်္ဂနွေ Eskisehir-အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထားဝန်ဆောင်မှု ...